Liverpool Oo Anfield Ku Xasuuqday Kooxda Norwich City Iyo Reds Oo Heshay Bilaabashadii Ay Doonaysay. - Gool24.Net
Liverpool Oo Anfield Ku Xasuuqday Kooxda Norwich City Iyo Reds Oo Heshay Bilaabashadii Ay Doonaysay.
Liverpool ayaa guul wayn ku furatay xili ciyaareedka cusub ee Premier league kadib markii ay Anfield ku garaacday kooxda Norwich City. Mohamed Salah, Origi iyo Van Dijk ayaa dhamaantood shabaqa soo taabtay qaybtii hore ee ciyaarta halka goolka furitaanku ahaa mid iska dhalis ah.
Liverpool ayaa qaab ciyaareed fiican iyo waliba natiijo wayn ku bilaabtay xili ciyaareedka cusub ee 2019/2020 inkasta oo ay guushan ku waayeen adeegii goolhaye Alisson Becker oo dhaawac looga saaray ciyaarta qaybteedii hore.
SHIXIHII RASMIGA AHAA EE LIVEROOL VS NORWICH CITY:
Badalkii: Sam Byram, Onel Hernandez, Mario Vrancic, Patrick Roberts, Moritz Leitner, Josip Drmic, Ralf Fahrmann.
Kaydka: Xherdan Shaqiri, James Milner, Adrian, Alex Oxlade-Chamberlain, Joel Matip, Naby Keita, Sadio Mane.
Liverpool ayaa xili ciyaareedka cusub ee Premier League ku bilaabtay isla qaabkii ay xili ciyaareedkii la soo dhaafay ku dhamaysatay waxayna culays wayn saareen kooxda heerka labaad ka soo dalacday ee Norwich City oo xili horeba goolal badan laga dhaliyay.
Daqiiqadii 7 aad ee bilawgii ciyaarta Liverpool ayaa heshay goolkeeda furitaanka kaas oo ahaa gool uu iska dhaliyay kabtanka Norwich City ee G. Hanley iyada oo Origi uu ahaa xidiga kubbadan sabab uga noqday in G. Hanley uu goolkan iska dhaliyay.
Goolkii furitaanka xili ciyaareedka cusub ee Premier leauge ayaa noqday gool iska dhalis ah laakiin kubbad qurux badan oo ay ka soo shaqeeyeen Andy Robertson iyo Origi ayaa G. Hanley ku qasabtay in uu si waali ah goolkan iskaga dhaliyay.
Daqiiqadii 19 aad Liverpool ayaa si qurux badan u keensatay goolkeeda labaad waxaana halkii uu gool dhalintii xili ciyaareedkii hore kaga tagay ka sii bilaabay Mohamed Salah kaas oo caawin fiican ka helay saaxiibkiisa Roberto Firmino. Wuxuuna Salah ciyaarta ka dhigay 2-0 ay Reds hogaanka ku dheeraysatay.
Daqiiqadii 28 aad qalbi difaaca Liverpool ee Virgil Van Dijk ayaa gool madax ah kooxdiisa Reds ugu keenay goolka saddexaad kadib markii uu caawin ka helay Mohamed Salah taas oo keentay in Salah uu hal gool dhaliyay isla markaana uu gool caawin sameeyay 28 kii daqiiqo ee xili ciyaareedkan ugu horeeyay.
Ciyaarta ayaa noqotay mid ay gabi ahaanba maamulkeeda la wareegay Liverpool waxayna Reds u muuqdeen kuwo waqti badan xili ciyaareedka isla soo haystay inkasta oo uu ahaa kulankii Premier league ugu horeeyay.
Daqiiqadii 32 aad Roberto Firmino ayaa gool layaableh dhalin lahaa laakiin goolhaye Krul ayaa sameeyay gool baadin u dhiganta farsamadii uu Firmino doonayay in uu goolkan ku dhaliyo.
Daqiiqadii 36 aad xamaasadii Anfield ayaa murugo isku badashay kadib markii ay taageerayaasha Liverpool arkeen goolhaye Alisson oo dhaawacmay kadib markii uu awoodi waayay in uu ciyarta sii wato.
Alisson ayaa markii hore awoodi kari waayay in uu garoonka ka baxo waxaana la filayay in uu laga dhex qaadayo balse daawayn kadib waxa uu ka baxay garoonka isaga oo dhutinaya taas oo Klopp ku qasabtay in uu garoonka soo galiyo goolhayaha uu sida xorta ah isniintii ku keensaday ee Adrian.
Daqiiqadii 42 aad waxaa Liverpool goolka afraad u keenay xidiga quluubta Reds ku waynaaday ee Divock Origi kaas oo si fiican u dhamaystiray kubbad caawin cajiib ah oo uu ka helay difaaca midig ee T. Alexander-Arnold.
Goolkan ayaa taageerayaasha Liverpool hoos uga dhigay walwalkii ay dhaawaca Alisson ka qaadeen wuxuuna Origi ciyaarta ka dhigay 4-0 ay Reds ku xasuuqayso Norwich City.
Qaybtii hore ee ciyaarta oo ahayd mid hal dhinac ka socotay ayaa lagu kala nastay 4-0 ay Liverpool guul ugu taagnayd isla markaana ay Norwich City ceeb kula kulmaysay Anfield.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Liverpool halkii ka sii waday dardartii ay qaybtii hore ku jirtay waxaana goolka shanaad ku dhawaaday in uu dhaliyo Henderson laakiin kubbada uu goolkan ku dhalin lahaa ayuu goolhaye Krul si cajiib ah uga beeniyay.
Wax yar kadib Fabinho ayaa darbo xoogan ka soo tuuray meel ka baxsan xerada ganaaxa waxayna ka soo booday Tim Krul laakiin Roberto Firmino oo kubbada ku celin kari lahaa ayaa soo daahay.
Mohamed Salah ayaa helay fursad cajiib ah oo uu goolkiisa labaad ee ciyaarta ku dhalin kari lahaa balse kubbad soo wareegaysay oo uu goolka Norwich ku tuuray ayaa wax yar birta u martay.
Daqiiqadii 64 aad kooxda Norwich oo isbadalo samaysay ayaa ugu danbayn heshay goolkeeda furitaanka ee xili ciyaareedka cusub kadib markii uu T. Pukki si layaableh uga dhex baxay difaaca Reds isla markaana uu goolhaye Adrian ka dhaliyay goolkii ugu horeeyay ee shabaqa Reds ee xili ciyaareedka cusub.
Ciyaarta ayaa noqotay 4-1 ay wali Liverpool hogaanka ku haysay waxayna Norwich bilawday in ay aamini kartay in ay goolal kale keensato maadaama oo ay Liverpool hoos u dhigtay dardartii ay ciyaarta ugu jirtay.
Daqiiqadii 74 aad Jurgen Klopp ayaa badalkiisa labaad ee ciyaarta sameeyay wuxuuna kaydka uga yeedhay xidiga fasaxa ku soo daahay ee Sadio Mane wuxuuna badalay Origi.
Markiiba Mane ayaa ciyaarta saamayn ku yeeshay wuxuuna soo celiyay dardartii weerar ee kooxdiisa Liverpool ay hoos uga dhacday.. Waxaana bilawday fursad abuuris badan oo Reds ay goolka shanaad ku raadinaysay.
Daqiiqadii 85 aad Arnold ayaa kubbad laaga xorta ah oo kooxdiisa meel halis ah loo dhigay waxa uu ku dhalin gaadhay goolka shanaad laakiin goolhaye Tim Krul ayaa sameeyay gool badbaadin cajiib ah.
Daqiiqadii 86 aad Klopp ayaa ciyaarta soo galiyay James Milner wuxuuna saaray Roberto Firmino iyada oo lagu sii dhawaanayay dhamaadka ciyaarta.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 4-1 ay Liverpool ku garaacday kooxda Norwich City waxayna Reds xili ciyaareedka cusub ku bilaabtay guul wayn oo raaxo leh inkasta oo dhaawaca soo gaadhay Alisson Becker uu noqday walalka kaliya ee ay jamaahiirta Reds wajaheen.